Evumile DB nguSihlalo
Ziziphi iintlobo zeemveliso TXJ ikakhulu ukujongana?
Thina ikakhulu ukuvelisa itafile lokutyela, isitulo elokutyela kunye itafile yekofu. Ezi zinto 3 lithunyelwa lukhulu.
Okwa ti Unganikeza kwesitulo lokutyela, TV-Sukuma, idesika Computer.
Yintoni na ubungakanani yakho minimum?
Ukuqalisa kwisikhongozeli. Kwaye malunga izinto 3 mix kwisikhongozeli. MOQ kuba nguSihlalo yi 200pcs, itafile na 50pcs, itheyibhile Ikofu 100pcs.
Yintoni na umgangatho yakho mfanelo?
iimveliso zethu unokuwisa EN-12521, iimvavanyo EN12520. Ke kwimarike yaseYurophu, sinako unikeze EUTR.
Yintoni na inkqubela lwemveliso yakho?
Sakha ngokulandelelana yocweyo imveliso eyahlukileyo itafile & isitulo, ezinjengezo workshop MDF, sigalelwe workshop inkqubo iglasi, workshop.etc metal.
Ingaba TXJ ukulawula njani umgangatho?
isebe lethu QC kunye QA ngokungqongqo ukulawula umgangatho kwi semi-ogqityiweyo iimpahla ugqibile. Baya kuhlola impahla ngaphambi kokuba yokulayisha.
Yintoni na umgaqo-nkqubo wakho iwaranti?
iimveliso zethu baphathe waranti unyaka omnye-egubungele iziphene mveliso. Isiqinisekiso sisebenza kuphela ukusetyenziswa indlu iimveliso zethu. Le waranti ayibandakanyi wear rhoqo kunye iinyembezi, umbala ngenxa sesichengeni ekukhanyeni, kakubi, shrinkage okanye pilling izinto, okanye wear etshabhisayo.
Yintoni na imbuyekezo yakho okanye umgaqo exchange?
Njengoko impahla yethu ngokuqhelekileyo ubuncinane enye kwisikhongozeli zabaxhamli. Phambi ekulayisheni isebe lethu QC uya kuhlola impahla yokuqinisekisa ok esemgangathweni. Ukuba kukho izinto ezininzi ezonakeleyo kanye kwi zibuko kuyo, iqela lethu intengiso ziya kufumana isisombululo okusemandleni ukuba phezulu kuwe.
Yintoni na ixesha wophathelo?
Ngokuqhelekileyo malunga 50 iintsuku ukwenza iimpahla isambuku.
Yintoni iinketho intlawulo?
T / T okanye L / C kuqhelekile.
Yeyiphi Imbobo iimpahla zophathelo?
Thina ngasentla nangasezantsi lemveliso. Ngoko izinto ukusuka kuhanjiso mveliso emntla Tianjin port. Nempahla ukusuka kuhanjiso mveliso ezantsi esuka Shenzhen port.
Ngaba kubonelela isampuli for free?
Isampuli luyafumaneka kwaye lolawulo elifunekayo TXJ-nkqubo wenkampani. Nangona le ntlawulo ziya kubuyiselwa kuwe emva kokuba umyalelo iqinisekisiwe.
Zingaphi iintsuku kuya kuthatha ukwenza isampula?
Ngokuqhelekileyo 15 iintsuku.
Yintoni cbm kunye ubunzima impahla ngento nganye?
Sinawo iinkcukacha ukuba ngusihlalo nganye kuquka ubunzima, umthamo kunye nomthamo angagcini 40HQ. Nceda uqhagamshelane nge email okanye ifowuni.
Ingaba ndithenga itheyibhile okanye nesitulo eliqela?
Siye MOQ for isitulo yokutyela kunye nobungakanani amancinci ngeke zaveliswa. Nceda uqonde.
Ingaba izitulo & neetafile okuqokelelwe-ndawonye?
Kuxhomekeka imfuneko sakho. Kudla umthengi kufuneka igcwele wokugiliswa, abanye kusenokufuneka pre-ndawonye. Wadiliza phakheji konga isithuba ngakumbi, oko kukuthi ezininzi kubekwa 40HQ yaye ngakumbi kwezoqoqosho. Yaye umyalelo ibandla iqhotyoshelwe kule ibhokisi.
Yintoni umgangatho ibhokisi? Ngaba oko sibe namandla kakhulu?
Sisebenzisa 5-umaleko ibhokisi incence efana nomgangatho esemgangathweni. Kwakhona siya kubonelela iphakheji umyalelo imeyile nganye imfuneko sakho, nto leyo yomelele ngakumbi.
Ingaba unayo showroom?
Thina showroom kwi-ofisi Shengfang kunye Dongguan apho ukwazi ukujonga itafile lokutyela, isitulo lokutyela, itafile ikofu.
Yimalini imali yokuthumela?
Oku kuxhomekeke apho kwizibuko ekuyiwa kuyo, nceda uqhagamshelane nathi ukufumana iinkcukacha eneenkcukacha.
Kwenzeka ntoni ukuze yam xa ndineengxaki uqhagamshelo okanye ubunzima technical?
Xa ibhokisi nganye, siya kubeka imiyalelo ibandla ngaphakathi oko kuya kukunceda ukuba ube imveliso. Ngexesha ukuba usenalo unayo nayiphi na imibuzo, nceda imeyili. Siza kukunceda ukuba ukuyisombulula.
Ndingayifumana ikhathalogu TXJ Furniture ithunyelwe kum?
I-resource engcono kakhulu epheleleyo zonke iimveliso i website yethu. Thina ukuhlaziya iimveliso ezintsha kwi website nanini.
Pu nguSihlalo , MDF Coffee Table , Vintage Pu Dining nguSihlalo , MDF Table , UK Fair Pu Dining nguSihlalo , Glass Coffee Table ,
Xinzhang Ukuphuhlisa Zone, Shengfang Town, Bazhou City, Hebei, China 065701